कलियुगका कुरा: December 2011
प्रेमिले लेखे कुखुराको रगतले प्रेमपत्र
बाग्लुङ आएर सुनेको प्रेमी प्रेमिकाको कथा। एकजना प्रेमीले आफ्नी प्रेमिकालाई रगतले लेखेर चिठी पठाएछन्। प्रेमिकालाई शंका लागेछर त होला नि। तिनले त्यो चिठीको रगत परिक्षणको लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइछन्। त्यो रगत कुखुराको भएको प्रयोगशालाले प्रमाणित गरिदिएछ।
नेपाली हाकिमहरुलाई एउटा टिप
हाकिमहरुलाई एउटा टिप्स : लोडसेडिङको नयाँ नयाँ तालिका आउने वित्तिकै हाकिमले प्रिन्ट निकालेर दिने भएकाले मेरा एकजना साथीलाई उनको हाकिम मन पर्छ रे। जान्नेले लोडसेडिङबाट नि फाइदा लिएकै छन्...
साँच्चैका शहीदले के गर्लान्
यी शहीद घोषणा गर्नेहरु र शहीद घोषणाको माग गर्नेहरुलाई माथि पुगेसी साँच्चैका शहीदले के गर्दा हुन् ? कसैलाई जान्ने मन भए केही न केही उपाय गरेर शहीद हुने लाममा लागिहालम् है... मलाई त हतार छैन।
गाडी दुकान खोल्ने कि बाबुराम जी
आँफैले निर्णय गराएर लिएका कोहीकोहीले गाडी फिर्ता गर्न थाल्दा त १५ वटा फिर्ता भइसकेछ। अझ जब्बरजस्ति सुविधा लेका र आफन्त नेताले चढ्न मिलाइदेका सप्पैले सरकारी गाडी फिर्ता गरे भने त हजार जति गाडी पुग्लान। अब त्यो कल्लाई चढ्न दिनु ? ज्ञानेन्द्र, पारस, हिमानी, गिरिजा, प्रचण्ड चढ्या गाडीमा चढ्न कसैले करोडौं फाल्न सक्छ भन्ने हाम्लाई लाइराछ। सरकारले गाडी दुकान खोल्ने हो क्या हो बाबुराम जी?
स्वर्गद्वारी मन्दिरमा गोडा सम्बन्धि नियम
केटाकेटीमा सरहर्ले गुडाफाट होकि घुँडाफाट - सतर्क भन्थे। अरुबेला उतिविघ्न बोलिचालीमा हाम्रातिर प्रयोग नहुने गोडा सम्बन्धी आफ्नै नियम रहेछ स्वर्गदारी मन्दीर प्युठानमा।
बन्द फिर्ता भइहाल्ला नि
अरु त बन्दले कति आत्तिएका छन् कुन्नि, म त ढुक्क छु। अमेरिकी राजदूत जीले कुन बेला बन्द कर्तालाई न भिसा न डिभी भन्छन् अनि काँग्रेसी जनले बन्द फिर्ता लिन्छन्। बरु समवेदना त तिनीहरु प्रति छ जो भोलि र पर्सी बन्द भइदिए घराँ घाम तापेर आफ्नो गच्छेअनुसार सुन्तलादेखि सोमरस सम्म खाँदै अफिसको तलबको मिटर घुमाउने विचारमा थिए।
माओवादीले पैसै हराए कि ?
अस्तिनै ३४ हजार सेना, हतियार ४ हजार मात्र भन्दा प्रचण्डले ३ हजार हतियार त हरायो भनेका थे, अहिले ३ हजार लडाकु शिविरबाटै हरायो भन्याछन्, भोलिपर्सी नभएका लडाकुको नाममा ल'को १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ फिर्ता दिनु भनेर संसदले/दलहरुले निर्णय गरे भने पनि कामरेडहरुले त्यो पैसा नि हरायो भन्छन् कि जस्तो लाइराछ... आखिर देशाँ सुरक्षा छैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ क्यारे। हतियार र लडाकु हराएकाले पैसा हराउन के बेर।
झलनाथको पुस्तक विमोचनमा कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोस्टका सम्पादक छाडिए
बेकारको कुरा हो कि के हो मेरो मनमा यो कुरा खेलेको खेल्यैछ। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले आफ्नो किताबको विमोचन किन नागरिक, राजधानी, समाचारपत्र र नयाँपत्रिकाका सम्पादकबाट गराए ? कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोस्टसहित अन्य सम्पादकलाई विमोचनका लागि बोलाएनन् कि बोलाएर पनि आएनन् कि? अरुले किताब विमोचन गर्याछन् मलाई किन हो कुन्नि खस खस लागिराको?
लडाकुबाटै माओवादीलाई २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ
देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीले नभएका लडाकुको नाममा १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लिएको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई झिनामसिना लागेपछि भ्रष्ट देशहरुको सूचीमा नेपाल माथि नउक्लिएर तल झर्छ त ? भारतमा रहँदा/बस्दा सुन्याहोलान् नि: नाम हो या बदनाम हो गुमनाम नहो..
बोकाको सत्यानाशले देश उभो लाग्ला र?
अस्ति नै जहाज साह्रै बिग्रियो भनेर नेपाल वायुसेवा निगमकाले बोका चढाएका थे, निगमको हालत झन् बिग्रेको बिग्रै भो, ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो शासन राम्रो होस्/टिकोस् भनेर दक्षिणकालीमा बोका मात्र होइन मनकामना पुगेर पाडो पनि चडाथे, राजसंस्थै ढल्यो। अब केही नपा'र नेपाली फुटबल टिमले नि साफ च्याम्पियनसिप जितम् भनेर हिजो दक्षिणकाली गएर बोकै चढाएछन्। बोकाको सत्यानाशले देश उभो लाग्दैन भनेर हाम्ले कहिले थाहा पाउने होला खोई...
अदालतले कनि अत्तो थाप्ने
अदालत जी, हुन त हजुरका कुराँ प्रश्न उठाए हजुरको मानहानी हुन्छ क्यारे, तर पनि वानेश्वरमा सडक मिचेर बनाका कम्प्लेक्स भत्काउन लागे नि सुकुम्बासीको भन्दै वाग्मती किनाराँ ठडाका बिल्डिङ खाली गर्न लागे नि, हजुरले किन हो अत्तो थाप्दिने ?
दो मिनटका मज्जा..
यो गुरुजी साहित्य पढेपछि यिनले के कारणले त्यो लेखे होलान् भनेर चिन्ता लाइराछ।
१) कि यस्का लेखक ज्यूलाई एड्स लाको हुनुपर्छ।
२) कि चाहिँ यिनले त्यस्तै कर्मको परिणाम स्वरुप करकापमा परेर बिहे गरेका हुनुपर्छ।
३) दुबै हैनन् भने नि अरु कसैका भोगाईलाई टिप्न तिनले जानेका रैछन्
भन्ने हामीलाई लाइराछ...